छोरी भएर जन्मिदा बुवाले हेला गरेकी पुजा शर्मा यसरी बनिन चर्चित अभिनेत्री ! – Nayabook
छोरी भएर जन्मिदा बुवाले हेला गरेकी पुजा शर्मा यसरी बनिन चर्चित अभिनेत्री !
अहिलेकी चर्चीत नायीका हुन् पुजा शर्मा । उनी नेपाली सिने क्षेत्रमा ब्यस्त नायीका पनि हुन् । पछिल्लो समय नायीका शुष्मा कार्कीसंगको विवादका कारण पनि उनी चर्चामा छन् । २०४९ साल वैशाख १८ गते सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेकी उनको बाल्यकाल देखि नै संघर्षपूर्ण भए । बुवाले छोराको चाहना राखेका र उनी छोरी भएर जन्मेका कारण पुजा र उनकी आमा दुर्गाले जिवनमा कहिल्यै परिवारवाट माया पाएनन् । श्रीमानवाट माया पाउन नसकेका कारण उनले छोरी पुजालाई भने राम्रो भविष्य दिने सोँच बनाइन् । त्यसैले उनी घर परिवार छोडेर छोरीलाई लिएर काठमाडौं आईन् । पुजाले जन्मेदेखि नै बुवाको माया पाउन सकिनन् । उनलाई आमा दुर्गाले नै आमा र वुवाको माया दिइन् । दुर्गाले पुजालाई कहिल्यै पनि बुवाको कमी महशुष हुन दिइनन् ।